हेर्नुहोस तपाईंको राशी अनुसार तपाईंलाई कुन पेसा गर्दा राम्रो हुन्छ – NepalajaMedia
वास्तुशास्त्रमा कुनै पनि काम सुरु गर्नुपूर्व ज्योतिषसँग परामर्श लिने गरिन्छ। राशि अनुसार काम नगर्दा कतिपयलाई असफलता मिल्ने गर्दछ। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार कुन राशिले कुन काम गर्दा शुभ हुन्छ ? हेर्नुहोस आआफ्नो राशी अनुसार तपाईंलाई कुन पेसा गर्दा राम्रो हुन्छ ।
मीनः यो राशि भएका व्यक्तिलाई बढी जागिर वाप्छ । भेइकल, गुप्तचर विभाग, फायर सर्भिस र अदालती सेवामा यो राशिलाई सफलता प्राप्त हुन्छ । यो राशिका व्यक्तिले सकेसम्म मसलाजन्य उत्पादनको काम नगर्दा राम्रो हुन्छ । आफ्नो काम्मा ध्यान दिनुहोला सबै काम्मा सफलता मिल्नेछ ।
Prevके साच्चै प्रेममा छन् ईन्दिरा र कर्मा ? यस्तो पो रहेछ यथार्थ
Next१४ लाख ऋण बोकाएर अर्कै युवति लिएर फरार, श्रीमति रुदै मिडियामा-भिडियो हेर्नुहोस
नेपालमा पनि यति गते बाट टिकटक बन्द हुदै (3306)
हे दैव ! अन्त्यमा केही सीप लागेन ! भर्खरै निभे कन्चन (हेर्नुस् भिडियो) (1454)
आ’फ्नै जीवनमा आधारित यति मिठो गीत रेकर्ड ग;राए अर्जुनले ..( भिडियो हेर्नुहोस् ) (1229)